Shirkii maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/Dhexe oo lagu wado in uu Manta dib u furmo | Radio Baidoa
Guriga Wararka Idaacada Shirkii maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/Dhexe oo lagu wado in uu...
Shirkii maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/Dhexe oo lagu wado in uu Manta dib u furmo
April 9 (Radio Baidoa)— Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Jowhar uu ka furmo wajiga labaad ee shirka Maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha, kaasoo uu hakad ku jiray tan iyo markii shirkaas si rasmi ah loo furay bishii Janaayo ee sanadkan.
Sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya Jowhar, shirkan ayaa wajigiisa labaad waxaa uu noqon doonaa mid odayaasha ka soo jeeda labada gobol isugu yimaadaan, iyadoo qorshuhu yahay in la guda galo qorshayaasha shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka C/raxmaan Maxamed Xuseen Odawaa ayaa khamiistii mar uu booqasho ku tagay Buulo Burde sheegay in maanta oo Sabtid ah uu furmi doono wajiga labaad ee shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe qeybta odayaasha.
Odayaal dhaqameedyo ka soo jeeda labada gobol ayaa ku sugan magaalada Jowhar, iyadoo maalintii shalay kulan ay yeesheen uga hadlay aayaha shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, kaasoo caqabado badan ay hareeyeen.
Wafdi ka socda dowladda Federaalka ayaa la filayaa inay maanta tagaan Jowhar, si ay u furaan wajiga labaad ee shirka Maamul u sameynta labada Gobol.
Inkastoo wali qaar ka mid ah beelaha reer Hiiraan ay diidan yihiin shirka Jowhar, hadana waxaa la ogeyn sida uu ku suurta geli karo shirka maamul u sameynta labada gobol, waxaana magaalada Beledweyn ka socda shirweyne dib u heshiisiin oo ay ka qeyb galayaan beelaha dega gobolka Hiiraan.
Dowladda Federaalka ayaa qorsheyneysa inay dedejiso dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, ka hor inta aan la gaarin bisha Agosto, xilligaasoo ku eg mudada dowladda.